Milestone - tarika Huaihai Holding
Niorina tamin'ny 1976 niaraka tamin'i Xuzhou Liangshankou Vehicle Factory ho orinasa teo aloha, ny Huaihai Holding Group no orinasa manamboatra fiara mini-tena mahay indrindra amin'ny sehatry ny orinasa
Ny fanoratana ny marika «Huaihai» dia nanatri-maso ny tantaran'ny fivoaran'ny indostrian'ny fiara Mini sinoa
Ny fananganana an'i Huaihai Holding Group, Jiangsu Province
Ny fototry ny fifandraisana, ny orinasa Jiangsu Zongshen. Miaraka amin'ny famatsiam-bola marobe mitentina 15,1 tapitrisa dolara hanatratrarana ny fampandrosoana 100% amin'ny vidiny sy ny vokatra, raha ny fahagagana indostrialy
Ny fananganana Jiangsu Zongshen faha-2 dia notohanan'ny famatsiam-bola 30,3 tapitrisa dolara avy amin'ny vondrona mba hahatratrarana 300000 isan-taona ny fahaiza-manao famokarana moto ary mamorona ny herin'ny orinasa ambony indrindra ao amin'ny orinasa.
Miaraka amin'ny laharam-barotra an-tsokosoko ny tsena anatiny, ny Jiangsu Zongshen Company dia mpanamboatra bisikileta lehibe indrindra any Sina.
Miaraka amin'ny vola 83.41 tapitrisa dolara mandray anjara amin'ny famoronana faha-3 an'i Jiangsu Zongshen, dia nisy ny fananganana marim-pototra mba hahatratrarana ny famatsiana tapitrisa tapitrisa sy ny orinasa No.1.
Naorina indray ho orinasa National Level Group Company, ny "Huaihai" dia lasa mpitarika sy fenitra amin'ny indostria.
Miaraka amin'ny famatsiam-bola million 15,1 tapitrisa dolara mankany Jiangsu Zongshen fananganana faha-4 sy tranobe ara-teknika mandrakotra ny 140000 metatra toradroa, ny orinasa dia nahazo tombony iray hafa teo amin'ny tampon'ity orinasa ity.
Jiangsu Zongshen Electronic & Mechanic Company dia naorina teo ambany fiaraha-miasa stratejika nataon'i Huaihai Holding Group sy Zongshen Group ho toy ny kilaometatra ilaina amin'ny fampandrosoana ny ambony
7,583 tapitrisa dolara no namatsy vola hametrahana ny orinasa Jiangsu Huaihai New Energy Vehicle Company mba hananganana orinasa malaza amin'ny sehatry ny EV.
Tianjin Zongshen Company dia natsangana niaraka tamin'ny 7,583 tapitrisa dolara mba hanatanterahana ny fametrahana stratejika manan-danja ao amin'ny tsenan'i Huaibei, ka namorona tranobe famokarana fiara mini-be eto amin'ity faritra ity.
Miaraka amin'ny fiaraha-miasa stratejika lehibe misy eo amin'ny vondrona Huaihai Holding sy ny Zongshen Group mba hahatsapa ny fandaharam-potoana voalohany ao amin'ny tsena anatiny atsimo andrefesana amin'ny fametrahana ny orinasa Chongqing Zongshen Vehicle ary mahazo ny toerana ambony indrindra amin'ny indostrian'ny famokarana fiara mini eto amin'ity faritra ity.
Ny Huaihai Holding Group dia namatsy vola be dia be hahazoana ny orinasa Navy 4813 Equipment Company, namorona ilay goavam-be mpamokatra ambaratonga nasionaly, Huaihai Mechanic & Electronic Technology Co, Ltd, izay manamarika ny fiposahan'ny orinasan'ny orinasa fototra.
Ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena fiaraha-miasa dia natomboka mialoha ny indostria miaraka amin'ny paikadim-pirenena The Belt and Road strate hoentina miorina amin'ny tsenan'ny tsena any ivelany, manaparitaka ny vokatra mivarotra eran'izao tontolo izao mba hananganana fototra tsara ho an'ny fandrosoana sy fampandrosoana ny asan'ny vondrona.
45 tapitrisa dolara no natambatra nahita an'i Hongan New Energy Auto Co, Ltd, nanangana ny sehatry ny fandraharahana avy amin'ny fiara toekarena mankany amin'ny fiara tondraka, nanatsara ny fivoaran'ny orinasa ho haingana sy salama.
Tamin'ny taona 2018 dia nitombo 70% ny isan'ny fanondranana isan-taona, izay mihoatra ny 70% amin'ny mponina maneran-tany, no laharana voalohany amin'ny indostria.